Ny amin'ny Chat roulette. Lahatsary rehetra chats roulette ho niady hevitra an-tserasera
Ny amin’ny Chat roulette. Lahatsary rehetra chats roulette ho niady hevitra an-tserasera
Ny fiahiana ho anao, izahay no nahary ny tsy manam-paharoa, ny vaovao sy ny mety tranonkala amin’ny napetraka ny lahatsary amin’ny chat. Ity tranonkala ity no ampiasain’ny olona an’arivony avy any faritra samy hafa any Etazonia ary firenena hafa. Mba manomboka mifampiresaka ao amin’ny chat roulette fotsiny ny solosaina amin’ny webcam sy ny fidirana amin’ny Aterineto. Ny lahatsary amin’ny chat dia manolotra anao an’arivony ny olona samy hafa ny tafatafa, mifidy, fa tsy manao fahadisoana. Tena mora mba hahitana namana vaovao, na dia ny fitiavana. Vakio ny ampy / fanononana tsy ampy ny mampiasa ny lahatsary amin’ny chat, ary manaraka azy ireo. Izy ireo dia noforonina mba ho aina ny fifandraisana ao amin’ity zamechatelna asa fanompoana. Ny sonia, Dia afaka manomboka mitady olona sy ny fifandraisana aminy. Ireto ny voaangona, saiky toy izany loharanon-karena ho an’ny olona samy hafa. Ny tanjona dia ny hanolotra mamely toy ny ‘Chatroulette’. Izany fanompoana Mampiaraka manana be dia be ny mitovy anarana. Saika ny firenena rehetra dia manana ny mifanitsy amin’ny mifanaraka amin’ny toe-tsaina sy ara-pitenenana fenitra ao amin’ny firenena ny anarany. Amin’ny chat roulette, ho eo amin’ny pejy ao ny namany sary, mora dia hahita olona ny tombontsoa isan-karazany sy ny fomba amam-panao. Conversationalist azo, na iza na iza. Toy ny antsika ny olona avy amin’ny firenena samy hafa. Ny fanompoana dia natao ho an’ny Fiarahana sy mifampiresaka. Izany no namorona ny fitsipiky ny roulette, noho izany ny anarana hoe «lahatsary amin’ny Chat Roulette». Ho fanajana ny ny olona hafa, na dia tsy mikasa ny hampita azy bebe kokoa. Ny lahatsary amin’ny chat manaraka ny fitsipika sy fotsiny mahazatra ny fahalalam-pomba ry zareo, ary ianao azafady ny hafa sy ny hahazo laza. Ny lahatsary amin’ny chat roulette — chat ao amin’ny tranonkala fakan-tsary, aiza no misy anao ny olona izay ianao amin’ny fifanakalozan-kevitra. Amin’izao fotoana bebe kokoa ny olona mianatra, mifandray, namana, ary na dia ny manomboka ny fifandraisana matotra, nihaona virtoaly. Tao amin’ny Aterineto, dia maro ny sisin-tany dia voafafa. Tsy tahotra, fahatokian-tena bebe kokoa. Ny lahatsary amin’ny chat roulette dia iray amin’ireo fomba tsara indrindra mba hampifaly ny tenanao ny avy amin’ny fampiononana ao an-trano. Ny asa fanompoana mitaky tsy vitan’ny am-bava ny fifandraisana, fa ny zavatra ho hitanao, hijery, ary koa ianareo namana mpiara-mitory aminy. Miezaka ny mamorona ny filaminana ao an-trano, ary ny tarehiny hanova mba liana ny interlocutors. Amin’ity tranga ity, dia ny toetra momba ny foto-kevitra, izay tsy dia mifandray. Mety tsy te-ho hita, amin’ity tranga ity, dia afaka miova koa fa Ianao dia tsy mahafantatra na fampiasana manokana fanitsiana ny fampiharana izany dia hanampy anao mba saika hanova na hanafenana ny bika aman’endriny. Ny tsotra sy mora ny fifandraisana amin’ny Aterineto, efa nanaiky ny rehetra ny lahatsary internet mampiasa ny fitsipiky ny roulette. Ny fifandraisana dia ho lasa mora kokoa, ary mora kokoa ny maro ny olona mitady interlocutors ao amin’ny Internet. Amin’ny Chat roulette dia noforonina momba taona lasa izay. Nanomboka tamin’izay, izany karazana fikarohana ho an’ny namana no nahazo lazany. Ny karazana toy ny lahatsary amin’ny chat dia lasa isan-taona kokoa sy kokoa. Izany no nahatonga antsika mba hanangona ny dia tena mahaliana ny santionany noho ny fialam-boly sy ny fialam-boly. Amin’ny Chat roulette manintona an’arivony interlocutors avy amin’ny kaontinanta. Ny fampiasana ny fitsipika dia tena tsotra, ka manao aminy dia tsy mahatonga tsy fahazoana aina. Amin’ny Chat roulette noforonina fampiasana ny fitsipiky ny kisendrasendra fifantenana ny interlocutor. Amin’io lafiny io, ka izany dia antsoina hoe Chatroulette, sy ny amin’ny rosiana — «amin’ny Chat Roulette». Ampy mba manana tranonkala fakan-tsary, kely maimaim-poana amin’ny fotoana sy ny toe-po ho an’ny fifandraisana tamin’ny tambajotra amin’ny lohahevitra isan-karazany. Ny fiaviana ny amin’ny chat roulette fitsipika avy any Moskoa.
Ankehitriny firenena rehetra manana ny iray, fara fahakeliny, ny analogue Chatroulette. Ao amin’ny karazana sasany ny amin’ny chat roulette afaka manao sivana amin’ny lahy sy ny vavy ny interlocutor, ohatra, mifidy fotsiny ankizivavy. Amin’ny fiaraha-monina maoderina, ny Aterineto manana andraikitra tena manan-danja. Matetika dia aleon’ny olona miaina ny fifandraisana niomerika.
Ny faniriana dia mahagaga
Mampita, ohatra, ao amin’ny lahatsary amin’ny chat ao amin’ny tranonkala fakan-tsary dia tena tsotra ny hanova ny interlocutor, raha toa izy ka tsy afa-po. Nanery ny «manaraka» bokotra ary manana vaovao ny mpiara-mitory tamiko. Izany no izay ny amin’ny chat roulette ary nahasarika mpankafy azy
← Ahoana no Hahafantatra ny Ankizivavy: Dingana (Sary)
Ny fomba hitsena ny ankizivavy eny an-dalana, an-tserasera, eny amin'ny trano fisotroana kafe, mba hanoratra →